“Tsenabe Boeny Mionjo”: tsy hampatoriana ny faritra | NewsMada
“Tsenabe Boeny Mionjo”: tsy hampatoriana ny faritra
Andiany fahadimy izao ny « Tsenabe Boeny Mionjo » ao Mahajanga, nanomboka ny 11 oktobra, mifarana rahampitso 14 oktobra. Fotoan-dehibe iray novolavolain’ny lehiben’ny faritra Boeny, i Saïd Ahamad Jaffar, hanairana (Mionjo) ny faritra. 40.000 ny andrasana hitsidika izany tsenabe izany, natao indrindra miaraka amin’ny JMJ Mada IX, ahitan’ireo tanora tontolon’ny toekarena any an-toerana.
Fomba hampandrosoana ny toekarena ho fampandraisana anjara ny sehatra tsy miankina ny fotoana. Tanjona telo : mampahafantatra ny faritra sy ny harena ao aminy, fampihaonana ireo mpandraharaha sy avy any amin’ny faritra hafa, miantso ny fiaraha-miasa hahitana tombontsoa mitovy.
Lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity : « Ny fambolena sy ny mpandraharaha, miaraka ho an’ny fampandrosoana ». « Koa rariny raha mifanome tanana hisian’ny toekarena mandroso sy maharitra . Zavatra roa ihany ny takinay : ny tsy hisian’ny krizy politika sy ny fahampian’ny herinaratra. Ny voalohany, hahafahanay mandroso ; ny faharoa, hahazoanay miantso ireo mpampiasa vola », hoy ny lehiben’ny faritra.
Mandray anjara araka izay tandrify azy amin’io hetsika io ny avy any Mayotte sy Comores ; ny masoivoho frantsay sy ny fiaraha-miasa alemaina. Ny adihevitra iarahan’ireo mpandraharaha sy ny teknisianina ao amin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria, ary misy fihenam-bidy ireo karazana varotra fampisehoana.